DEG DEG: NISA oo soo saartay digniin culus oo la xiriirta xiisadda siyaasadeed ee dalka | dalkaan.com-Wararka ugu danbeeyay ee soomaaliya
Home Warkii DEG DEG: NISA oo soo saartay digniin culus oo la xiriirta xiisadda...
DEG DEG: NISA oo soo saartay digniin culus oo la xiriirta xiisadda siyaasadeed ee dalka
Muqdisho (Dalkaan.com) – Hay’adda Nabad-Sugidda iyo Sirdoonka Qaranka Soomaaliya ee NISA ayaa uga digtay ciidamada qalabka sida inay ku milmaan siyaasadda, xilli ay xiisad siyaasadeed ka taagan tahay dalka.
Qoraal kooban oo NISA ay soo dhigtay twitter ayaa lagu yiri “Taliska NISA wuxuu ku howlan-yahay sugidda amniga. Wuxuuna ka digayaa ku-milanka siyaasadda ee Ciidamada Qalabka Sida iyo in la siyaasadeeyo waajibaadka Ciidamada. Shacabka Soomaaliyeed waa ku mahadsanyahay mar walba garab istaaga Hay’adaha Amniga Qaranka.”
Qoraalka NISA ayaa waafaqsan digniino ay horey u bixiyeen taliyayaasha Ciidamada Xoogga Dalka iyo Booliska, oo ay ciidanka uga digeen inay ku-milmaan siyaasadda.
Magaalada Muqdisho ayaa waxaa hadda ka taagan cabsi la xiriirta inuu dagaal ka dhici karo, ayada oo Ciidamada Badbaado Qaran ay diyaar u yihiin inay difaacaan ra’iisul wasaare Rooble, oo uu Farmaajo Isniintii isku dayey inuu awood ciidan ku qabsado xafiiskiisa.
Rooble ayaa dhacdadaas kadib uga digay ciidamada ammaanka inay ka amar qaataan madaxweynihii hore ee Farmaajo.
Fallanqeeyayaasha siyaasadeed ayaa rumeysan in digniinaha ka dhanka ah ku-milanka ciidanka ee siyaasadda ay yihiin kuwa lagu bad-baadinayo Farmaajo, oo la rumeysan yahay in hadda ay kasoo horjeedaan ciidamada intooda badan.
Waxay tusalae usoo qaateen, in Odawaa, NISA iyo Xijaar inaysan marna ka hadal markii ciidamada dowladda uu Farmaajo bilo kahor u adeegsaday inuu ku weeraro madaxweynayaal hore.
NISA ayaa waxaa hoggaamiya Yaasin Farey oo ku xiran Farmaajo iyo taliyihii hore ee hay’adda Fahad Yaasiin, ayada oo xiisadda hadda taagan ay ka dhalatay sababo ay ka mid yihiin kursiga xildhibaan ee Yaasiin Farey uu ku guuleystay oo muran badan dhaliyey.
Farmaajo ayaa hadda wajahaya cadaadis xooggan, waxaana haddii xiisadda siyaasadeed ay isku beddesho mid ciidan suurta-gal ah in beesha caalamka ay ku qasabto inuu baneeyo madaxtooyada.
Deg deg Dhaq-dhaqaaqyo ciidan oo la dareemayo Muqdisho, Jawi Cakiran Iyo...
Deg Deg Faarax Macalin oo Si Jees Jees ah Uga Hadlay...
Shanta kursi ee Galmudug. Farmaajo oo faa’iido heysta. Qoor Qoor oo...
Lionel Messi oo ka mid ah ciyaartoyda Paris Saint-Germain ee laga...
Qoor Qoor ma ka baxsan doonaa mashaqada Gaalkacyo?
MARKHAATIGA NOOL INQILAABKII DHICISOOBAY & DILKII CIRRO
Sadio Mane ayaa mar kale ka hadlay mustaqbalka Liverpool